Mi PC Suite3: Flashing Recovery ROMs – Xiaomi Guide
Xiaomi Knowledge App
ကျနော့်ရဲ့ blog ကို app တစ်ခုအနေနဲ့ဖုန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ပါ application လေးကို install လုပ်ထားပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစာကိစ္စအတွက် အကုန်ဖတ်ရှုလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Download Xiaomi Knowledge app [ Xiaomi Knowledge Cloud ] or [ Google Drive ] or [ PCloud ] MIUI Fans များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ… 🙂
Mi PC Suite3: Flashing Recovery ROMs
Published April 12, 2018 by Thet Zaw Ko
Mi PC Suite3ကို သုံးပြီး Recovery rom zip တွေတင်နည်းပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ ဖုန်းက Boot Loop ဖြစ်နေပြီး Recovery ထဲကနေ Factory reset ချတာလဲမရ ဖြစ်နေလို့ Firmware ပြန်တင်ဖို့လိုအပ်လာချိန်၊ ဖုန်းထဲက Updater ကနေ Update လုပ်ဖို့ တင်မရဖြစ်နေချိန်မျိုးတွေမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Stable version ကနေ Developer version .. Developer version ကနေ Stable version .. စတာတွေကို ချိန်းလို့ရပါတယ်။ Version အနိမ့်ပြန်ဆင်းတာမျိုး အဆင်ပြေပါတယ် (MIUI9ဆို9မှာပဲဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ 9.5 ကနေ 9.2 စသည်…)။ China rom ကနေ Global rom .. Global rom ကနေ China rom ချိန်းတာမျိုးမရပါ။ MIUI9ကနေ MIUI 8 ပြန်ဆင်းတာမျိုးမရပါ။ အမြင့်ကို Update တာပဲရပါမယ်။
ADB, Fastboot driver တွေ ကောင်းကောင်းသိနေအောင်၊ အလုပ်လုပ်နေအောင်တော့ သည် Post [ –> BLU Tool USB Driver Fix <– ] ထဲကနည်းအတိုင်း Driver Installation ကိုပြုလုပ်ပေးထားပါ။
Mi PC Suite 3.0 ကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်တာ သည် Post [ –> Mi PC Suite 3.0 For Android 6.0 and higher Devices <– ] မှာဖတ်လုပ်ပါ။
သည် Post မှာတော့ Mi Max နဲ့စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ သည်ထဲကအတိုင်း ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေမယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ မိမိဖာသာ လုပ်ဖို့ကြုံလာချိန်မှာ စမ်းသပ်ပါ။ အတွေ့အကြုံယူပါ။
Mi Max ကို Global Stable 9.2 ကိုတင်ထားပါတယ်။ အဲသည်ကနေ Update လဲဖြစ်နေတဲ့ Global Stable 9.5 ကိုတင်တာလုပ်ပါတယ်။
Global Stable 9.5 ကနေ 9.2, 9.1 စတာတွေကိုပြန်ဆင်းတာလုပ်ပါတယ်။ ဆင်းချင်သလောက်ဆင်းမရပါ။ အနည်းငယ်လောက်ပဲရပါတယ်။ MIUI 9.5 မှာ Themes, Fonts တွေ စိတ်ကြိုက်သုံးမရလို့ MIUI 9.2 ပြန်ဆင်းချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Global Stable 9.5 ကနေ Global Developer နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ 8.3.29 ကို ပြောင်းတာလုပ်ပါတယ်။
Global Developer 8.3.29 ကနေ Global Stable 9.5 ဆို ပြန်ပြောင်းတာလုပ်ပါတယ်။
Global Stable 9.2 ကနေ 9.5 ကို Update တဲ့သဘောပါ။ ဖုန်းထဲက Updater ထဲမှာ လုပ်မရတာမျိုး၊ ဖုန်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Boot Loop ဖြစ်ပြိး တက်မလာတော့ချိန် Firmware လဲပြန်တင်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ Update ပါရှိနေရင် တစ်ခါတည်း တင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
ဖုန်းကို Recovery Mode ကို ဝင်ပါ။ ဝင်နည်း နှစ်ခုရှိပါမယ်
ဖုန်းကကောင်းနေသေးတယ်။ သုံးလို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း Updater Settings ထဲကနေဝင်လို့လဲ ရပါတယ်။
ဖုန်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေ Keys တွေနဲ့ဝင်တာကတော့ အမြဲရနေမှာပါ။ ဖုန်းကောင်းရင်တော့ Power အရင်ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့။ ပြိးရင် Vol UP နဲ့ Power Key ကို တူတူတွဲနှိပ်ထားပါ။ Mi Logo လေးပေါ်လာပါမယ်။ အဲသည်အချိန် Power key ကိုလွှတ်ပါ။ Vol Up key ကတော့ Mi Recovery ထဲရောက်သည်ထိသာ နှိပ်ပေးထားလိုက်ပါ။
Mi PC Suite ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း FLASH ROM နေရာကိုရွေးလိုက်ပါ။ သူ့ထဲမှာလဲ ဖုန်းပုံလေးနဲ့ Mi Recovery ထဲက Connect with Mi Assistant ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။ ဖုန်းထဲမှာ Vol UP/Down keys တွေနဲ့ အပေါ်အောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တာကိုရွေးလုပ်ခိုင်းတာက Power key ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီးခိုင်းပါတယ်။ တရုတ်လိုတွေပေါ်နေလဲ အောက်ဆုံးဟာတစ်ခုလို့သာ မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ ဖုန်းပုံလေးကို USB Cable ထိုးခိုင်းနေတဲ့ပုံပေါ်လာရင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းကို USB Cable နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ Mi PC Suite က ဖုန်းကို Connect လုပ်သွားပြီး အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။ ဖုန်း Model ကိုပြပါမယ်။ လက်ရှိတင်ထားတာ V9.2.1 ဆိုတာ ပြပါတယ်။ သူ့အောက်မှာ Update လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ Ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ V9.5.2 ဆိုတာကိုပြပါတယ်။ Download ROM and flash update ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး ပေါ်နေပါတယ်။ ဘာ Update မှ မရှိဘူးဆိုရင် အဲသည် ခလုပ်လေးမှိန်နေပြီး နှိပ်လို့မရပါ။ သူ့အလုပ်မရှိပါ။ သည်မှာတော့ Update ကိုလဲတင်ချင်လို့ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Flash ဖို့ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ ပထမတစ်ခုက User Data တွေ မပျက်စေပဲ Flash ပေးမယ်ဆိုတာပါ။ MIUI 8, MIUI9ROM တွေတင်တာမှာ Support လုပ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက User Data အကုန် Wipe (ဖျက်) ပြိးမှတင်တာပါ။ MIUI9ROM တွေတင်တာကိုပဲ Support လုပ်ပါမယ်။ ROM တင်ချိန် ပိုမြန်ဆန်ပါမယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာကို မိမိတင်ချင်တဲ့ ROM version နဲ့ကိုက်တာကို ရွေးလုပ်ပါ။ ကျနော်ကတော့ အမြဲပဲ အားလုံးဖျက်ပြီး Clean တင်လေ့ရှိပါတယ်။2ကိုပဲရွေးလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
User data အကုန်ပျက်မယ်လို့ ပြောလာမယ့်ဟာလေးတွေကိုတော့ သဘောတူကြောင်းပဲ ဆက်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့..
အခုဟာက ကျနော်တို့ computer ထဲ rom ဒေါင်းထားတာကိုလုပ်တာမဟုတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ အင်တာနက်ရနေစေပြီး Update လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ROM ကို ဒေါင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းတာပြီးဆုံးရင် rom ကို check လုပ်ပြိး တင်ပေးသွားမှာပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ဒေါင်းတော့ Updater ကနေ၊ ဖုန်းကနေ ဒေါင်းထားထက်စာရင် rom zip ကို Error ကင်းကင်းရဖို့ပိုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ Flash နေချိန် 0% to 100% လို့ပေါ်တာနှစ်ခါပေါ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခါက ဖုန်းထဲကို rom zip အား Side-Load mode နဲ့ပို့ချိန်မှာပေါ်တာပါ။ ဒုတိယတစ်ခါပေါ်တာက ဖုန်းမှာ တကယ် flash နေချိန်မှာ ပြပေးတာပါ။ ဒုတိယတစ်ခါ 100% ပြီးသွားရင် တင်တာပြီးဆုံးပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
100% ပြည့်ရင်တော့ အိုကေပါပြီ။ ဖုန်းလဲ သူ့ဖာသာ Reboot လုပ်ပြီးတက်သွားပါမယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ မိမိတင်ချင်တဲ့ rom zip ကိုတင်တာပါ။ မိမိတင်ချင်တာက ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရင် downlaod ပြုလုပ်ထားရမှာပါ။ Xiaomi Forum က မိမိ Device အတွက် Download page မှာ နောက်ဆုံး Version အမြဲရှိပါတယ်။
အနိမ့်ကိုပြန်ဆင်းချင်တာမျိုးဆိုလဲ Older Versions ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
မိမိဒေါင်းထားတဲ့ rom တွေကိုတင်ဖို့ကတော့ အောက်ပါပုံမှာ Select ROM Package ဆိုတာကိုရွေးပါတယ်။
အောက်ပါပုံလေးတွေကတော့ Global Stable 9.5 ကနေ Global Stable 9.2 ဆီ ပြန်ဆင်းတာပါ။
အထက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း တင်လာတဲ့ Global Stable 9.2 ကနေ Global Developer 8.3.29 ကိုတင်တာ၊ Global Developer ကနေ Global Stable 9.5 ကို ပြန်ရွေးတင်တာ အထက်ကပုံတွေအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့တင်ချင်တာကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ download ပြုလုပ်ထားပါမယ်။ ပြိးရင်တော့ Select ROM Package ကနေပဲ ဒေါင်းထားတဲ့ rom zip ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် Boot loader lock ဖြစ်နေချိန် firmware တင်ဖို့လိုအပ်လာချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းထဲမှာပဲ Update လုပ်မရတာဖြစ်ဖြစ်၊ MIUI version အနည်းငယ်လေး တက်ဆင်းချင်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ အဆင်ပြေပါပြီ။
Published in Firmware, General Tips and Other Tools